अभिभावकहरु भ्रममा नपर्न महेन्द्र विद्यालयको आह्वान
बैशाख २, २०७६ | नुवाकोट
श्री महेन्द्र आवशीय विद्यालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर अभिभावकहरुलाई भ्रममा नपर्न आह्वान गरेको छ । ०७६ सालको शैक्षिकसत्र सुरु भएलगतै शिवपुरी गा.पा. वडा नं. ८ स्थित यस विद्यालयको बारेमा भ्रामक हल्ला फैलिएकोले यस्तो आह्वान गरेको हो ।
विद्यालयले जनाएअनुसार हाल यो विद्यालय खारेज हुने हल्ला एकाएक फैलिएको छ । यस्तो कपोलकल्पीत झुट्टा सूचनाहरुले अभिभावकहरुलाई भ्रमित परेको जनाइएको छ । झुट्टा कुराहरु नगर्न र नगराउन साथै यस्ता निराधार कुराहरुमा कुनै सत्यता नभएकोले विश्वास नगर्न विद्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्ती अनुसार यस्ता अनावश्यक हल्ला फैलाउने माथी प्रचलित कानुन बमोजीम कारवाही गर्ने भएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६ मा आफ्ना नानी बाबुहरुलाई पठाउन पनि विद्यालयले अभिावकहरुलाई अनुरोध गरेको छ । साथै, २०७६ सालको बैशाख २ देखि १० गतेसम्म विद्यालयमा भर्ना खुलेको जानकारी पनि गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण र सुधारमा सहयोग गर्नु सम्पूर्ण अभिभावकहरुको दायित्व भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।